ट्याक्सीमा नयाँ मपदण्ड, रोकिएला त ठगी ? - ।। Naya Kuro ।।
९ पुष २०७६, बुधबार १२:१३ December 25, 2019 Naya KuroLeaveaComment on ट्याक्सीमा नयाँ मपदण्ड, रोकिएला त ठगी ?
महंगो शुल्क तिर्दा पनि हाल सञ्चालित ट्याक्सीमा यात्रुका पर्याप्त सामग्री राख्न सकिदैन । अर्कातर्फ ट्याक्सीभित्र पसिसक्दा उकुसमुकुस हुने अवस्था आएपछि सरकारले एसी भएको ठूलो आकारको ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ ।
जसले यात्रुलाई सजिलो हुने ठानिएको छ । तर यात्रुहरु भने नयाँ मापदण्डको ट्याक्सी भन्दा पनि ट्याक्सीमा हुने ठगी रोक्न माग गरिरहेका छन ।
यातायात व्यवस्था विभागले मंसिर २ गते जारी गरेको ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड कार्यन्यवनमा आएको १ महिना वितेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको मंसिर २ गतेको निर्णय अनुसार कार्यन्वयनमा आएको ट्याक्सीको नयाँ मपदण्ड लागु भएको हो । नयाँ मापदण्ड अनुसार सरकारले १२ सय सीसी भन्दा मुनिका ट्याक्सीको दर्ता बन्द गरेको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सीलाई पनि विस्तारै विस्थापित गर्ने सरकारी योजना छ । १२ सय सीसीको ठूलो आकारको ट्याक्सीमा यात्रुको सामान राख्ने पर्याप्त ठाउँ हुने तथा बातानुकुलित व्यवस्था अर्थात एसीको समेत व्यवस्था हुने भएकाले यात्रुलाई सुविधा हुने यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तिर्थराज खनाल बताउँछन् ।
ट्याक्सी व्यवसायीले भने सरकारको निर्णय विकल्पसहितको भए मात्र व्यवहारिक हुने बताएका छन । हाल सञ्चालित ट्याक्सीको अवस्था के हुने भन्नेबारे उनिहरुले प्रश्न उठाएका छन ।
अर्कातर्फ महंगो रकम खर्चिएर खरिद गरिने ट्याक्सी सञ्चालनका लागि सडक पूर्वाधार पनि तदअनुरुपकै व्यवस्थित हुनुपर्ने उनिहरुको माग छ । अर्थात ट्याक्सीसँगै सडकको पनि मापदण्ड तय हुनुपर्ने ट्याक्सी व्यवसायी सुरेस तन्डुकार बताउँछन् ।
सर्वसाधारणले भने मापदण्ड जस्तो सुकै ल्याए पनि पहिले ट्याक्सीले गर्ने मनोमानी र ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सर्वसाधारणको सुझाव छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा ८ हजार भन्दा वढि ट्याक्सी सञ्चालनरत छन् । सरकारी निर्णय प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आए ८ हजार ट्याक्सी सञ्चालकसँग आश्रित व्यक्तिलाई समेत प्रभाव पर्नेछ ।
सडकबाट उद्धार गरिएका व्यक्तिले ठेगाना नै बताउँदैनन्
कात्रो,खल्ति र आर्थिक घोटला